USolwazi Alain Assounga nomlingani wakhe ocwaningweni owayefunda e-UKZN, uSolwazi Saraladevi Naicker, bekwi-AFRAN Congress eMombasa, eKenya.
Ucwaningo Oluhlanganyelwe Lwakuleli Lunqobe Indondo Yomhlaba
Ithimba labacwaningi abawongoti kwezempilo nonjiniyela base-UKZN nososayensi bezempilo baseSefako Makgatho Health Sciences University (e-SMU) nase-University of Witwatersrand bahlanganyele ocwaningweni lokuphucula ukusebenza kwezinso kubantu base-sub-Saharan Afrika.
Lolu cwaningo, okungolokuqala emhlabeni, ludle umhlanganiso we-Best Abstract kulo mkhakha, laphuma isibili kwi-Best Abstract kwi-African Association of Nephrology (i-AFRAN) Congress eMombasa, eKenya.
I-Chronic Kidney Disease (i-CKD) yandile e-Afrika kanti iyimbangela yakho konke ukufa kwabantu okungamaphesenti angama-13.4. Ucwaningo olusha lulinganisa ukuthi ngonyaka wezi-2030, zingaphezu kwamaphesenti angama-70 iziguli ezixinwe yisifo sezinso eziyobe zisemazweni antulayo njengamazwe ase-sub-Saharan Afrika. Okuyobhebhezela ingozi kulabantu ukudlanga kwezifo ezithathelanayo njengesandulelangculazi, i-glomerulonephritis, i-schistosomiasis ne-leishmaniasisd.
Amahlalakhona ezinso avamile kubantu abanenhliziyo eshaya ngamandla, isifo sikashukela nezinye izifo ezithathelanayo. Yingakho kumqoka ukugwema ukuba nalezi zifo, ukuze zisheshe zibonakale nokuthi zilawuleke kubantu abadala base-Afrika lapho kunesimo sokuntula izinto eziningi.
Enye yezindlela zokubona i-CKD wukukala izinga le-glomerular filtration (i-eGFR) ukuhlola ukuthi zisebenza kanjani izinso. Ikala ukuthi kudlula igazi elingakanani ngomzuzu kuma-glomeruli. Ama-glomeruli yizisefo ezincane ezisezinsweni ezihlunga udoti egazini.
Ukukala ukuhluzeka kukadoti egazini kuvame ukushaya eceleni kubantu base-sub-Saharan Afrika. Izibalo ezisetshenziswayo zithathelwe kwezabantu abansundu baseMelika kanti zivame ukuba ngaphezu kwesikali sabantu base-sub-Saharan Afrika. Inhloso yocwaningo oluhlanganyelwe bekuwukuqhamuka nendlela entsha yokukala ehambisana nabantu base-Afrika ukuphucula indlela yokukala ngenhloso yokukwazi ukubona isifo sezinso.
Kulolu cwaningo kwahlolwa abantu abadala abansundu abangama-76 abayiziguli zaseNkosi Albert Luthuli Central nase-King Edward VIII. Kwasetshenziswa indlela entsha yokukala ehlaziya izinto eziningi. Umphumela kwaba wukuqhamuka nendlela entsha yokukala izinto.
Lo msebenzi ubuyingxenye yocwaningo lwezifundo zobudokotela zomuntu osebenza e-UKZN nowumfundi wakhona wakudala, uDkt Nomandla Madala, oyiNhloko yezokweLapha zangaPhakathi e-SMU. USolwazi Alain Assounga, iNhloko ye-Nephrology uphawulile ngemiphumela yalolu cwaningo. Uthe: ‘Sithole indlela yokukala izinga le-glomerular filtration ebhekiswe kubantu base-Afrika, esiyibize nge-African GFR. Le ndlela ingcono kakhulu ekulinganiseni ngamaphesenti angama-75 kusukela kwangama-64 kubantu base-Afrika. Sijabule kakhulu ngemiphumela yocwaningo njengoba izophucula indlela yokuhlola isifo sezinso e-sub-Saharan Afrika.
‘Ngibonga ithimba longoti elibe negalelo kulolu cwaningo olusha, olumqoka. Kulona kukhona oDkt Nomandla Madala, no-Monica Oluwakorede Oluyede, oSolwazi Saraladevi Naicker, Jules-Raymond Tapamo no-Guy Honoré.’
Amagama: wu-MaryAnn Francis
Paediatrics Specialist Climbs Mount Kilimanjaro at Age 65
Ososayenzi base-UKZN Bagixabezwe nge-L’Oréal-UNESCO for Women in Science Grants
Idili Lethimba lase-UKZN kanye Nabafundi BaseBotswana Bakudala
Osolwazi base-CLMS Ohlwini Lwabacwaningi Abavelele
UKZN Students Champion Mental Health Awareness amongst High Schools in Umlazi
A Letter to Bandi: In Memory of Nobandile Biko
Lecturer Awarded Researcher Mobility Grant
KFC Celebrates 10 Years of Adding Hope
FirstRand Foundation International Postgraduate Scholarships Roadshow
Postgraduate Student Publishes a Book
Yoga Classes Launched for Staff and Students
CHS Arms Employees with EQ skills
Team Building Promotes Open Communication to Improve Service Delivery